प्राचीन राशिको तपाईंको कर्क राशी - सत्य वेद पुुस्तकहरू
06/06/2021 21/10/2021 Ragnar
गंगटाले कर्कटको सामान्य तस्बिर बनाउँदछ जुन ल्याटिन शब्द क्र्याबबाट आएको हो। आजको आधुनिक ज्योतिषशास्त्रले प्राचीन राशिको अध्यन गर्दा,तपाईंले कुण्डलीको माध्यमबाट सल्लाह लिनुपर्दा, कर्कट भन्नाले प्रेम, सौभाग्य,धन,स्वस्थ र तपाईंको आफ्नो व्यक्तित्वको अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नु हो ।
तर के पूर्वजहरुले यस्तै प्रकारले कर्कटको बारेमा पढेका थिए?
मूल रूपमा यसको अर्थ के थियो?
सचेत रहनुहोस् ! यसको उत्तरले तपाईंको ज्योतिषालाई अप्रत्याशित तरिकाबाट खोल्दछ – जब तपाईंको कुण्डली जाँच गर्नुहुन्छ तपाईंले आफूलाई सोचेको भन्दा फरक यात्रामा संलग्न भएको पाउनुहुन्छ…
हामीले प्राचीन ज्योतिषको अन्वेषण गरेका थियौं, र प्राचीन कुण्डलीको कन्यादेखि मिथुन सम्म हेरिसकेपछि, हामी कर्कटका साथ जारी राख्छौं ।
कर्कट नक्षत्रको ज्योतिषशास्त्र
कर्कट तारा नक्षत्रको यो तस्वीर अवलोकन गर्नुहोस्। के तपाईं ताराहरूमा गंगटा जस्तो देखिने केही देख्न सक्नुहुन्छ?
कर्कट तारा नक्षत्रको फोटो। के तपाई एउटा गंगटा देख्न सक्नुहुन्छ?
यदि हामीले कर्कटमा ताराहरूलाई रेखाहरूका साथ जोड्‍यौं भने पनि अझै यो गंगटालाई देख्न गाह्रो हुन्छ। यो उल्टो Y जस्तो देखिन्छ।
रेखाहरुद्वारा जोडिएको ताराहरूको साथ कर्कट नक्षत्र
यहाँ राशिको राष्ट्रिय भौगोलिकन फोटो छ, जुन उत्तरी गोलार्धमा कर्कटलाई देखाउँछ।
कर्कटमा गोलो घेरका साथ राष्ट्रिय भौगोलिक तारा सूची
कसरी मानिसहरू पहिलो पटक यसबाट गंगटाको विचारलाई ल्याए? तर जहाँ सम्म हामीलाई थाहा छ कर्कट मानव इतिहासमा पछाडि फर्केर जान्छ।
अन्य राशि नक्षत्रहरूको जस्तै, कर्कटको तस्बिर नक्षत्र भित्रबाट स्पष्ट छैन। बरु, एउटा गंगटाको विचार पहिले आयो। पहिले ज्योतिषीहरूले ज्योतिषशास्त्र मार्फत तस्वीरहरुलाई ताराहरुमा एक माथि अर्को राखे। पूर्वजहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई गंगटा नक्षत्र औंल्याउन र तिनीहरूलाई यससँग सम्बत कथा भन्न सक्दथे ।
किन? पूर्वजहरुलाई यसको के अर्थ थियो?
एक गंगटाको साथ कर्कट ज्योतिषशास्त्र तस्बिर
अर्को गंगटाका साथ कर्कट ज्योतिषशास्त्र तस्बिर
गंगटा होइन तर कर्कट ६९ चिन्ह भएको गंगटा जस्तो देखिने माछा कर्कट राशि तस्बिर
यहाँ मिस्रको डेन्डेरा मन्दिरमा २००० वर्ष भन्दा बढी पुरानो राशि छ जहाँ कर्कटको तस्विर रातोले गोलो लगाइएको छ।
कर्कटलाई रातोले गोलो लगाइएको दण्डेराको प्राचीन मिश्री राशि
जे होस् तस्बिरलाई रेखाचित्र द्वारा ” गंगटा ” नाम दिएपनि यो वास्तवमा गोब्रे किरा जस्तो देखिन्छ । लगभग ४००० वर्ष पहिलेको प्राचीन मिश्री अभिलेखले कर्कटलाई गोब्रे किराको रूपमा वर्णन गर्‍यो जुन उनीहरूको अमरत्वको प्रतीक हो।
प्राचीन मिस्रमा गोब्रे किराले पुनर्जन्म वा पुनर्जीवन को प्रतीक देखाउँथ्यो। एक गोब्रे किरा वा गोब्रे कुराको टाउको भएको मानिसले सामान्यतया मिश्री देवता खेप्रीलाई अंकित गर्दछ जसलाई उदाउँदो सूर्य भन्ने बुझिन्छ ।
खेप्री, एक प्राचीन मिश्री ईश्वरले गोब्रे किराको टाउकोको प्रतिनिधित्व गर्दछ।  नयाँ राज्यको चिहानको चित्रहरूमा आधारित
प्राचीन कथामा कर्कट
हामीले देख्यौं कि बाइबलले बताउँछ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले आफ्नो कथा प्रकट गर्न नक्षत्रहरू बनाउनुभयो। कन्याबाट राशि चिन्हहरुले हामीलाई यो कथा देखाउँदै आएको छ।
कर्कटले कथालाई थप बढावा दिन्छ। आधुनिक कुंडलीको हिसाबले तपाईं कर्कट हुनुहुन्न भने पनि कर्कटको ज्योतिषीय कथा जान्न लाभदायक छ।
कर्कटको मूल अर्थ
प्राचीन मिश्रीहरू त्यो समयमा राशिको कथासँग धेरै नजिक थिए त्यसैले आधुनिक ज्योतिषीय कुण्डलीको गंगटा भन्दा गोब्रे कीरा प्राचीन कर्कट राशिको अर्थ बुझ्ने कुंजी हो। मिश्री शास्त्री गुरु वालेस बजले खेपेरा र प्राचीन मिश्रीहरूका स्कारब गोब्रे किराको बारेमा लेखेका थिए
एक पुरानो प्राइभल ईश्वर थियो, र पदार्थको प्रकार जुन आफैंमा जीवनको कीटाणु समावेश छ जुन एक नयाँ अस्तित्वमा वसन्त हुन लागेको छ; यसरी उनले मृत शरीरलाई प्रतिनिधित्व गरे जहाँबाट आत्मिक शरीर उठ्ने क्रममा थियो। उसलाई टाउकोको भु be्गो भएको मानिसको रूपमा चित्रण गरिएको छ र यो कीरा उनको प्रतीक बन्न पुग्यो किनकि यो आत्म-जन्मजात र आत्म-उत्पादन गरिएको मानिन्छ।गुरु
डब्ल्यू ए बज । मिश्री धर्म पी ९९
स्कारब गोब्रे किरा : पुनरुत्थानको प्राचीन प्रतीक
स्कारब गोब्रे किरा अन्ततः वयस्क गोब्रे किरा मा रूपान्तरण हुनु भन्दा धेरै जीवन चरणहरू भएर जान्छ। गोब्रे किरा अण्डा बाट निस्केपछि गँड्यौला जस्तो लार्भा बन्छन् जसलाई घुन किरा भनिन्छ। घुन किराको रूपमा तिनीहरूको अस्तित्व जमीनमा गोबर, ढुसी, जरा वा सडेको मासु जस्ता सडेका पदार्थहरू खाएर बाच्दछन्।
घुन किराको रूपमा घस्रे पछि, यसले आफैलाई कोयाेमा परिरत गर्दछ। यस अवस्थामा सबै गतिविधि बन्द हुन्छ। अब खाना लिईदैन र सबै इन्द्रियहरू बन्द हुन्छन्। जीवनका सबै कार्यहरू बन्द हुन्छन् र गोब्रे किरा कोयो भित्र निष्क्रिय रहन्छ। यहाँ घुन किराले यसको शरीर विच्छेद गरेर पुनः जोडी रूपान्तरण गर्दछ । तोकिएको समयमा वयस्क गोब्रे किरा कोयो बाट बाहिर आउँदछ। यस वयस्क गोब्रे कीराको शरीरको बनावट गँड्यौला जस्तो शरीरसँग मिल्दैन जुन केवल जमीनमा मात्र घस्रिन सक्थ्यो। अब गोब्रे किरा बलपूर्वक हिँड्छ , आफ्नो इच्छा अनुसार हावा र घाममा माथि उड्छ।
प्राचीन मिश्रीहरूले गोब्रे किराको पूजा गरे किनकि यसले प्रतिज्ञा गरिएको पुनरुत्थान पहिलो मानवहरूलाई दिने भाव प्रकट गरेको थियो ।
कर्कट – पुनरुत्थान शरीर प्रतीक
कर्कटले घोषणा गर्दछ कि हाम्रो जीवनले पनि यस्तै प्रकारको दृष्टान्तलाई मान्दछ। अहिले हामी पृथ्वीमा बस्छौ, कष्ट र दुःखका दास, अन्धकार र शंकाले भरिएका – केवल अयोग्यता र बाधाहरूको गाँठो जस्तो कि पृथ्वीमा जन्मेको र फोहोर खाने घुन किरा , जबकि हामीमा बीज र अन्तिम महिमाको सम्भावना रहेको छ।
तब हाम्रो पार्थिव जीवन मृत्युमा समाप्त हुन्छ र सुकेको लाश जस्तो अवस्थामा जान्छ जहाँ हाम्रो भित्री व्यक्ति मृत्युमा सुत्छ, र हाम्रो शरीर पुनरुत्थानको आह्वानमा चिहानबाट बाहिर निस्किने पर्खाइमा छन्। यो कर्कटको प्राचीन अर्थ र प्रतीक थियो – जब उद्धारकर्ताले बोलाउनुहुन्छ तब शरीरको पुनरुत्थान सुरु हुन्छ।
जसरी गोब्रे किरा यसको निष्क्रियताबाट निस्की आउँछ त्यसरीनै मरेकाहरू पनि बिउँझनेछन्।
२.पृथ्‍वीको धूलोमा सुतेका भीड़हरू उठ्‌नेछन्, केही अनन्‍त जीवनको लागि र अरूहरूचाहिँ शर्म र अनन्‍त तिरस्‍कारको लागि। ३.बुद्धिमान्‌हरू आकाशको चमकजस्‍तै र धेरैलाई धार्मिकतामा डोर्‍याउनेहरूचाहिँ ताराहरूजस्‍तै सदासर्वदै चम्‍किरहनेछन्‌।
दानियल १२: २-३
यो तब हुनेछ जब ख्रिष्टले हामीलाई उहाँको पुनरुत्थानको बाटोमा हिँड्न आह्वान गर्नुहुन्छ।
२०.वास्‍तवमा ख्रीष्‍ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ। सुतिजानेहरूमध्‍येमा उहाँचाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्‍छ। २१.किनकि जसरी मानिसबाट मृत्‍यु आयो, त्‍यसरी नै मृतकहरूको पुनरुत्‍थान पनि मानिसबाट नै आयो।२२. किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन्, त्‍यसै गरी ख्रीष्‍टमा सबै जीवित पारिनेछन्‌। २३.तर हरेक आ-आफ्‍नै क्रमअनुसार— ख्रीष्‍टचाहिँ अगौटे फल, त्‍यसपछि उहाँको पुनरागमनमा ख्रीष्‍टका आफ्‍नैहरू।२४. तब अन्‍त्‍य आउनेछ, जब उहाँले हरेक शासन, हरेक अख्‍तियार र शक्ति नष्‍ट पारेर परमेश्‍वर, अर्थात्‌ पितालाई राज्‍य सुम्‍पिदिनुहुनेछ।२५. किनकि उहाँले आफ्‍ना सारा शत्रुलाई आफ्‍ना पाउमुनि नपारुञ्‍जेल उहाँले राज्‍य गर्नैपर्छ।२६. सबैभन्‍दा पछि नष्‍ट पारिने शत्रु मृत्‍यु हो।२७. “किनभने परमेश्‍वरले सबै कुरा उहाँका पाउमुनि अधीनमा राख्‍नुभएको छ।” तर यो स्‍पष्‍ट छ, कि “सबै कुरा उहाँको अधीनमा राखिएको छ” भन्‍नाले परमेश्‍वर आफै त्‍यस अधीनतामुनि हुनुहुन्‍न, जसले सबै कुरा ख्रीष्‍टको अधीनमा राखिदिनुभएको हो।२८. जब सबै कुरा उहाँको अधीनमा ल्‍याइन्‍छन्, तब स्‍वयम्‌ पुत्र उहाँको अधीनमा हुनुहुनेछ, जसले सब थोक उहाँको अधीनतामा राख्‍नुहुन्‍छ, ताकि परमेश्‍वर नै सबै थोकका सर्वेसर्वा होऊन्‌।
१ कोरिन्थी १५:२०-२८
नयाँ पुनरुत्थानको महिमा
गँड्यौला जस्तो किरा जसबाट वयस्क गोब्रे किराको उत्पन्न हुन्छ जसमा अकल्पनीय विशेषताहरु र क्षमताहरू भएका फरक तत्वहरू हुन्छन् , त्यसरीनै हाम्रो पुनरुत्थान भएको शरीर आजको हाम्रो शरीरहरू भन्दा भिन्नै तत्त्वहरूको हुनेछ।
२०. तर हाम्रो नागरिकता स्‍वर्गमा छ। त्‍यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता, अर्थात्‌ प्रभु येशू ख्रीष्‍टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौं।२१.उहाँले, जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्‍याउन सक्‍नुहुन्‍छ, हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्‍नै महिमाको शरीरजस्‍तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ।
फिलिप्पी ३: २०-२१
३५.तर कसैले सोध्‍ला “मृतकहरू कसरी पुनर्जीवित हुन्‍छन्, र तिनीहरू कस्‍ता किसिमको शरीर लिएर आउनेछन्‌?” ३६.हे मूर्ख! जे तिमी रोप्‍तछौ त्‍यो नमरिकन सजीव हुँदैन। ३७.जे तिमी रोप्‍तछौ त्‍योचाहिँ पछि हुने शरीर होइन, तर बीउ मात्र रोप्‍तछौ, चाहे त्‍यो गहूँ, अथवा अरू कुनै किसिमको अन्‍न होस्‌।३८. तर आफूलाई खुशी लागेबमोजिम परमेश्‍वरले त्‍यसलाई एउटा शरीर दिनुहुन्‍छ, र हरेक किसिमको बीउलाई त्‍यसैको शरीर दिनुहुन्‍छ।३९.सबै शरीर एकै किसिमका हुँदैनन्‌। मानिसको शरीर एक किसिमको, र जीवजन्‍तुहरूको अर्कै किसिमको, चराहरूको अर्कै किसिमको र माछाहरूको अर्कै किसिमको शरीर हुन्‍छ।४०.अनि शरीर पनि स्‍वर्गीय र पार्थिव हुन्‍छन्‌। स्‍वर्गीय शरीरको तेज एक किसिमको छ, र पार्थिव शरीरको तेज अर्कै किसिमको। ४१.सूर्यको तेज एक किसिमको, चन्‍द्रमाको तेज अर्कै किसिमको, र ताराहरूको तेज अर्कै किसिमका हुन्‍छन्‌। किनभने एउटा तारा अर्को ताराभन्‍दा तेजमा भिन्‍दै हुन्‍छ। ४२.मृतकहरूको पुनरुत्‍थान पनि त्‍यस्‍तै हो। जुन शरीर विनाशमा गाडिन्‍छ, त्‍यो अविनाशमा जीवित हुन्‍छ।४३. अनादरमा त्‍यो गाडिन्‍छ, महिमामा त्‍यो जीवित हुन्‍छ। दुर्बलतामा त्‍यो गाडिन्‍छ, शक्तिमा त्‍यो जीवित हुन्‍छ। ४४.प्राकृतिक शरीरमा त्‍यो गाडिन्‍छ, आत्‍मिक शरीरमा त्‍यो जीवित हुन्‍छ। प्राकृतिक शरीर छ भने आत्‍मिक शरीर पनि अवश्‍य हुन्‍छ।४५. यसकारण यस्‍तो लेखिएको छ, “पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो।” अन्‍तिम आदम जीवन दिने आत्‍मा भयो। ४६.पहिलोचाहिँ आत्‍मिक होइन, तर प्राकृतिक हो, र त्‍यसपछि चाहिँ आत्‍मिक हो।४७. पहिलो मानिस माटोले बनिएको, पृथ्‍वीबाट हो। दोस्रो मानिस स्‍वर्गको हो।४८. माटोले बनिएको मानिसजस्‍तो थियो, माटोले बनिएकाहरू पनि त्‍यस्‍तै हुन्‍छन्, र स्‍वर्गीय मानिस जस्‍तो छ, स्‍वर्गकाहरू पनि त्‍यस्‍तै हुन्‍छन्‌। ४९.जसरी हामीले माटोका मानिसको रूप धारण गरेका छौं, त्‍यसरी नै स्‍वर्गका मानिसको रूप धारण गर्नेछौं।
१ कोरिन्थी १५: ३५-४९
यो उहाँको आगमन हो जब यो हुनेछ।
१३.तर भाइ हो, सुतिगएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्‍ने हामी इच्‍छा गर्दैनौं, र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरूजस्‍ता शोक गर्नु नपरोस्‌।१४. किनकि हामी विश्‍वास गर्छौं, कि येशू मर्नुभयो र फेरि जिइउठ्‌नुभयो र त्‍यसरी नै परमेश्‍वरले उहाँमा सुतिगएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्‍याउनुहुनेछ।१५. प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौं, कि हामी, जो जीवित छौं र प्रभुको पुनरागमनसम्‍म बाँचिरहन्‍छौं, सुतिगएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्‍नेछैनौं। १६.किनकि प्रभु स्‍वयम्‌ हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्‍वर्गदूतको आवाज र परमेश्‍वरका तुरहीको सोरसित स्‍वर्गबाट ओर्लनुहुनेछ, र ख्रीष्‍टमा मरेकाहरूचाहिँ पहिले बौरिउठ्‌नेछन्‌। १७.तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्‌न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइलगिनेछौं, र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौं।१८. यसैकारण एकले-अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्‍त्‍वना देओ।
१ थिस्सलोनिकी ४: १३-१८
राशिफल ग्रीक”होरो” (घण्टा) बाट आएको हो र यसको अर्थ विशेष घण्टा वा समयलाई चिन्हित (स्कोपस) गर्नु हो। येशूले निम्न प्रकारले कर्कट घण्टा (होरो) लाई चिन्हित गर्नुभयो
२४. “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, जसले मेरो वचन सुन्‍छ र मलाई पठाउनुहुनेमाथि विश्‍वास गर्छ, त्‍यससित अनन्‍त जीवन छ। त्‍यो न्‍यायमा आउँदैन, तर मृत्‍युदेखि त्‍यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। २५.साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, त्‍यो समय आइरहेछ, र त्‍यो समय अहिले हो, जब मृतकहरूले परमेश्‍वरका पुत्रको सोर सुन्‍नेछन्, र सुन्‍नेहरू बाँच्‍नेछन्‌। २६.किनभने जसरी पिता आफैमा जीवन छ, उसरी नै उहाँले पुत्रलाई पनि आफैमा जीवनको स्रोत हुने अधिकार दिनुभएको छ।
एक विशेष घडी आउँदैछ जब एक जसले संसारको अस्तित्वमा बोल्नुभयो फेरि बोल्नुहुनेछ। ज-जसले सुन्छन् तिनीहरू मृत्युबाट उठ्दछन्। कर्कट यस पुनरुत्थानको घडीको प्रतीक थियो जुन ताराहरूबाट पूर्वज हरुले पढेका थिए।
तपाईको कर्कट पठन
तपाईं निम्न प्रकारले आज कर्कट राशिफल लागू गर्न सक्नुहुनेछ।
कर्कटले तपाइँलाई तपाइँको पुनरुत्थानको होरोमा निरन्तर हेर्न भन्दछ। उनीहरूले तपाईंलाई मूर्ख बनाउन नदिनुस् जसले भन्दछ की त्यहाँ पुनरुत्थान जस्तो केही आउँदैन। तपाईं मूर्ख हुनुहुनेछ यदि तपाईं केवल खाने र पिउनेको लागि र यहाँ र अहिले राम्रो समयको लागि बस्नुहुन्छ। यदि तपाईंले सम्पूर्ण विश्व प्राप्त गर्नुभयो र यसलाई प्रेमीहरू, रमाइलो र उत्साहले भरिनुभयो र तपाईंले आफ्नो आत्मा गुमाउनुभयो भने तपाईंले के प्राप्त गर्नुहुनेछ?
त्यसैले दृढ खडा हुनुहोस्। कुनै कुराले तपाईलाई हल्लिन नदिनुहोस्। आफ्नो आँखा देखिएको मा भन्दा नदेखिने मा स्थिर गर्नुहोस्। देखिएको अस्थायी हो, तर जे नदेखिने कुरा छ त्यो अनन्त छ। नदेखिने मा सुतेको ठूलो भीड उनीहरूलाई बोलाएको आवाज सुन्न तपाईं सँगै प्रतीक्षा गर्दै अगाडि बढ्छ। तपाईलाई नदेखेको दृश्यबाट रोक्ने सबै कुरा फालिदिनुहोस् र पापलाई फालिदिनुहोस् जसले सजिलै पासोमा पार्दछ। विश्वासका अग्रगामी र सिद्धकर्ता जीवित थुमामा तपाईंको आँखा स्थिर गर्दै तपाईंको लागि चिन्हित गरिएको दौड धैर्यताका साथ दौडनुहोस्। उहाँको अगाडी राखिएको खुसीको लागि उहाँले क्रूसको दु: ख र तिरस्कार सहनुपर्यो जसकाकारण उहाँ परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि हुनुभयो। उहाँको बारेमा सोच्नुहोस् जसले पापीहरूको लागि सबै विरोधहरु सहनुभयो, ताकि तपाई थाक्नु हुनेछैन र हृदय गुमाउनुहुनेछैन।
थप राशि कथा मार्फत र कर्कटमा गहिरिएर
मुक्तिदाताले कर्कटलाई धेरै पहिले ताराहरूमा राख्नुभयो भन्ने कुराको संकेत दिन उहाँ पुनरुत्थानद्वारा उहाँले आफ्नो छुटकारा पूरा गर्नुहुनेछ। राशिफल कथा सिँह सँग समाप्त हुन्छ।
यहाँको ज्योतिषा ज्योतिषशास्त्रको आधार सिक्नुहोस्। कन्याको साथ यसको सुरुवात पढ्नुहोस्।
तर कर्कटसँग मिल्ने थप लेखहरू पनि पढ्नुहोस्:
• पुनरुत्थान पहिलो फलहरू: तपाईंको लागि जीवन
• येशू, जीवन मुक्त, मृतकहरूको पवित्र शहरमा यात्रा गर्नुहुन्छ
• दिन ७, स्वोस्ती विश्राममा
• येशूको पुनरुत्थान: मिथक वा इतिहास?
एक पुस्तक को रूप मा राशि चक्र अध्याय को पीडीएफ डाउनलोड गर्नुहोस्
कर्का कुंडली, कर्का क्यान्सर, क्यान्सर नक्षत्र, क्यान्सर मिति, क्यान्सर राशि, क्यान्सर राशिफल, क्यान्सर साइन, दैनिक राशिफल। कर्का राशिफल